OPride.com|Hambaa Habalee Cittee » Lallaba Hin Dhagayamne
Home » Asoosama, Headline
Submitted by on January 4, 2011  4:44 pm4 Comments
/Asoosama gabaabaa- Amaan Hedatootiin/ *****************************
-1- Guyyaan Dilbata ganama. Saa’aan guyyaa gara tokkoo fi cinaati. Hin roobu. Duumessi garuu ulfaateera. Ulfaachuu qofaa miti. Gurraachateera; Finfinnee guutuu irratti. Namni naannoo Qaallitti akkuma namoota naannoo kaanii duumessa dorrobeeru uf gubbatti laalaa gara hajaa isaa wol mura. Jaarsaa fi jaartiin woyii konkolaataa jiddu jireessa nama fe’u woyii keessaa bu’anii dhadhaabatan. Gurbaan cufantaa konkolaatichaa qabatee dhadabatu “kuunno achii dhaqaa” jedhee karra woyii itti akeeke. “Qaallittii maarramiyaa” jedha barruun afaan Amaaraatiin karra san gubbaa mudhatu. Mana hidhaa Qaallittii.
“Dhiisi obboleessa koo!” jedhee mataa irbee itti fufe kuun. “…dubbiin yoom qawwee dhukaasuu fi dhiisuu taate… Oromoo ta’uun…” jedhee uduu Tolchaan hin fixatin, sagale guddiftuun wol faana iyyitu maqaa isaa dhoofte. Waamichi waanuma eegaa ture ta’us maqaa isaa dhageennaan rifate. Nama dhiheenna kana, akkuma tasaa dhufee isa dubbisetu, abbaa fi haati isaa akkasumas namni biraa guyyaa adhaa dhufee akka isa dubbisu itti hime. Namni biraa, ka dhufee isa dubbisu eennu akka ta’e inni gaafannaan “namuma beektu! Hin shakkinii dubbisi!” jedheen namni gaafas kana itti hime sun. Akka namni guyyaa adhaa dhufee isa dubbisu ammoo, nama amma woliin haasayu Jiloo Qilxuutii fi namoota muraasatti himeera. Akkuma maqaan isaa waamameen Jiloo achumatti dhiisee ka’ee balbala laale. Umriin shantama dhudhuleera. Hojjaa hin gikkata. Bifti adha gurraachatus dur diima ta’uu hin beessisa. Qaamaan ammoo duruu qadhaadha. Ammoo jireenna keessa jiruun taan caalaa xochateera. Gabbahee bitaa-mirga midhatee, jaakkeettii moofaa wolitti harkfataa gara waaman qajeele. Rifachuu irraa dhikkifni onnee isaa waan yeroo san dhagayu mara caalaa itti dhagayama. Haga qabsoo Oromootti makame garaan malee ijaan booyee hin beeku. Wanni nama boochisaa waan isa hin qunnaminiifii mitii. Meeqa fi meeqa keessa tare? “Dhiirti hin aarti malee hin boochu. Yoo booches imimmaaniin fuula hin dhiqattu. Garaa ishii keechatti!” jedhan dur akaakayyuun isaa. Jecha akaakayyuu isaa irraa dhagayaa guddate santu, imimmaan isa dhooggaa laata? Hin beeku. Yoo silaa taa’ee ka booyuu ammoo, mara caalaa ka isa boochisu, ka waahiloota isaa, isa biraa kufaniiti. Adha garuu Tolchaa garaan malee ijaan booyee hin beenne, imimmaan ija keessa mare. Abbaa fi haadha isaa arguuf deemaara. Keessattuu haadha isaa,ta yeroo baay’ee “Tolaa koo” uduu jedhaniin woggoota heddu dura adda baheen.
Pages: 1 2 3 4 5 6	4 Comments » Gaachana says:	January 10, 2011 at 6:38 am	Amaan
Said says:	December 14, 2011 at 10:50 am	Obboo Amaan
OPride.com|Hambaa Habalee Cittee » Worraaqsa Bineensotaa – “Animal Farm” in Afaan Oromo says:	February 3, 2013 at 6:00 am	[…] Hedatoo Qeerransoo is an author and linguist. His first book, “Lallaba Hin Dhagayamne“, is now available in paperback in Minneapolis and Houstin, […]
Walgaltu Alaa Galtii Jedhan... says:	October 19, 2013 at 4:14 pm	I also live in Denver and I don’t know about this Greater writer living next door.